एमाले भित्रका चर्चामा रहेका यी अनुहार, को को पर्लान् त ओलीको नजरमा ? – Setosurya
काठमाडौं– पार्टी एकताको निर्णयपछि वाम गठबन्धनको ध्यान मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा रहँदा सिंहदरबारको यात्रा गर्न मन्त्रीका आकांक्षी सांसदहरु व्यग्र भएर बसेका छन्। सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेभित्र मन्त्रीका आकांक्षीहरुको दौडधुप यतिबेला उत्कर्षमा छ। सांसदहरु शीर्ष नेताको घरदैलो चहार्दै लबिङ गर्न व्यस्त छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लालबाबु पण्डित र थममाया थापा मगरलाई समावेश गर्दै प्रारम्भिक मन्त्रिमण्डल गठन गरिसकेका छन्। दुवैलाई ‘सामान्य’ मानिने मन्त्रालय दिएर प्रधानमन्त्री ओलीले दुई पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक समेत बस्न भ्याइसकेका छन्।
मन्त्रीका आकांक्षीहरु धेरै भए पनि एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार, मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय बनाउने तयारी छ। दुवै दलले गठन गरेको कार्यदलले छरितो मन्त्रिमण्डल बनाउन सुझाव दिए पनि दुई दर्जनभन्दा बढी सांसदले मन्त्रीको आकांक्षासहित पार्टीभित्र दबाव दिइरहेका छन्।
एमालेमा प्रभावशाली मानिएका ईश्वर पोखरेल मन्त्री बन्ने सूचीको पहिलो नम्बरमा छन्। मन्त्रालयको बाँडफाँट तत्काल नटुंगिएकाले उनको ध्यान प्रभावशाली मन्त्रालयमा छ।
दोस्रो संविधानसभामा चुनाव हारेपछि एमालेबाट प्रदीप ज्ञवालीले सरकारमा जाने अवसर पाएनन्। तर, यस पटक कांग्रेसका युवा नेता मानिएका चन्द्र भण्डारीलाई हराउँदै संसदको यात्रा तय गरेको ज्ञवाली समेत शक्तिशाली मन्त्रालय सहित सरकारमा जाने तयारीमा छन्। पार्टीभित्र बौद्धिक नेताको छवि बनाएका ज्ञवाली प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र पनि हुन्।
मन्त्रीका लागि चर्चामा रहेको अर्को नाम हो, योगेश भट्टराई। एमालेको माथिल्लो कमिटीमा रहेका प्राय: सबै सदस्यले पदको लाभ हासिल गरे पनि लोकप्रिय युवा नेता भट्टराई त्यो अवसरबाट सधैं वञ्चित रहे। यस पटक चुनावी अभियानका क्रममा ताप्लेजुङ गएका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले सभामा बोल्दै उनलाई मन्त्री बनाउने वाचा समेत गरेका थिए। वचनका पक्का मानिने ओली यस पटक पनि नचुक्ने विश्वास एमाले नेताहरुको छ।
विद्यार्थी राजनीतिबाट पार्टी राजनीतिमा छाएका नेता रविन्द्र अधिकारी मन्त्रीका बलिया दाबेदार हुन्। लगातार तीन पटक जननिर्वाचित अधिकारीलाई यस पटक सरकारमा समावेश गर्नुपर्ने दबाव पार्टीभित्रका नेताहरुलाई समेत छ। यसअघि व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा रहेका बेला राम्रो क्षमता प्रदर्शन गरेका अधिकारीलाई मन्त्री बनाउन स्वयं पार्टीका शीर्ष नेताहरु समेत सकारात्मक छन्।
पश्चिम नेपालबाट सरकारमा सहभागी हुने सांसदमा चर्चाको केन्द्रमा दार्चुलाका नेता गणेश ठगुन्ना छन्। पार्टी केन्द्रिय कमिटी सदस्य रहेका उनी एमालेबाट मन्त्रीको सूचीको प्राथमिकतामा छन्।
एमालेबाट मन्त्रिपरिषदमा देखिन सक्ने अर्को अनुहार हो, रघुवीर महासेठ। मधेसबाट सेठ नै प्राथमिकतामा रहेको एमालेका एक नेताले नेपाल लाइभलाई बताए।
प्रदेश ७ मा कांग्रेस नेतृ आरजु देउवालाई पराजित गरेका कैलालीका नारदमुनि राना समेत मन्त्री बन्ने चर्चा छ। त्यस्तै, दलितबाट छविलाल विश्वकर्मा र सिन्धुपाल्चोकका शेरबहादुर तामाङ समेत मन्त्रीका लागि लबिङ गरिरहेका छन्।
यस्तै, विगतमा उद्योगमन्त्री भइसकेका महेश बस्नेत पुन: मन्त्री बन्न प्रधानमन्त्री ओली समक्ष निरन्तर दबाब दिइरहेका छन् भने ओली निकट मानिने काभ्रेका गोकुल बाँस्कोटा समेत मन्त्री बन्ने चर्चा एमालेभित्र छ।
किन परेनन् भुसाल र भट्टराई ? यस्तो रहेछ कारण :
चुनाबमा पराजित भएपछि यस्तो आयो अर्जुन जोशीको प्रतिकृया
आन्दोलनको प्रतिकारमा उत्रियो मधेसी मोर्चा, एमालेका कार्यालय ध्वस्त पार्ने घोषणा